လောကကြီးကိုအရှုံးပေးပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဆုံးစီရင်သွားတဲ့ မောင်လေးရဲ့အကြောင်းကို ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ရင်ဖွင့်ပြောပြလာတဲ့ သံစဉ်မောင် – Cele Top Stars
ချစ်လှစွာသောပရိသတ်ကြီးရေ အနုပညာညီအစ်မနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဘေဘီမောင်နဲ့ သံစဉ်မောင်က ကျရာနေရာမှာ တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်တူကိုယ်တူ ဝါသနာတူတဲ့ ဘေဘီမောင် နဲ့ သံစဉ်မောင်က ညီအစ်မအရင်းတွေဆိုပေမယ့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သူငယ်ချင်းတွေလိုပဲ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဘေဘီမောင်နဲ့ သံစဉ်မောင်တို့ ညီအစ်မနှစ်ယောက်စလုံးကို အားပေးကြပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကာလတွေမှာတော့ သံစဉ်မောင်နဲ့ နေဒွေး ကြားမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကောလဟာ လတွေကြောင့် ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်. …
သူမတို့ကို ချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုနဲ့ ရပ်တည်နေခဲ့တာကြောင့် ခုဆိုရင်ပျော်ရွင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်နော်..သံစဉ်မောင်ကတော့ အစ်မဖြစ်သူ ဘေဘီမောင်နဲ့အတူ အိမ်ကကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုဘဲ ဝိုင်းကူပြီးလုပ်ပေးနေသူ ဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ကလည်း သံစဉ်မောင် ရဲ့ Instagram story တွင် ဝမ်းနည်းစရာ သတင်းလေးတစ်ခု တင်ပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ သူမနဲ့ တရားစခန်းမှာ အတူဆုံဖူးတဲ့ ကိုရင်လေးတစ်ပါး ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဆုံးစီရင်သွားတဲ့အတွက် ပြောမပြတတ်အောင် နာကျင်ခံစားနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်…။
ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ကောင်လေးနဲ့ ပြောခဲ့တဲ့အမှတ်တရလေးတွေကိုလည်း ဝေမျှပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။” ဘာလို့များ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေတဲ့လမ်းကိုမှ ရွေးသွားတာလဲ သုသုလေးရယ်” ၊ ” ကိုရင်ထွက်တော့ အိမ်မှာဆယ်ရက်လောက်လာနေပြီး စာလေးရေးပြီးထားခဲ့တယ် မက်ဆင်ဂျာကနေလည်း တစ်အိမ်လုံးကို ကန်တော့ခဲ့ပါတယ်တဲ့ ဒါနောက်ဆုံး နှုတ်ဆက်သွားတာလား မောင်လေးရယ်” ဆိုပြီး ဝမ်းနည်းစွာဖြင့် ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးတွေလည်း ဝမ်းနည်းနေတဲ့ သံစဉ်မောင်ကို အားပေး စကားလေး ရေးပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်…
Source: Than Sin Mg
ခဈြလှစှာသောပရိသတျကွီးရေ အနုပညာညီအဈမနှဈယောကျဖွဈတဲ့ ဘဘေီမောငျနဲ့ သံစဉျမောငျက ကရြာနရောမှာ တာဝနျတှကေို ထမျးဆောငျနကွေတဲ့ သူတှဖွေဈပါတယျ။ စိတျတူကိုယျတူ ဝါသနာတူတဲ့ ဘဘေီမောငျ နဲ့ သံစဉျမောငျက ညီအဈမအရငျးတှဆေိုပမေယျ့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ သူငယျခငျြးတှလေိုပဲ ပေါငျးသငျးဆကျဆံကွသူတှေ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှကေလညျး ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ဘဘေီမောငျနဲ့ သံစဉျမောငျတို့ ညီအဈမနှဈယောကျစလုံးကို အားပေးကွပါတယျ။ မကွာသေးခငျကာလတှမှောတော့ သံစဉျမောငျနဲ့ နဒှေေး ကွားမှာ ဖွဈခဲ့တဲ့ကောလဟာ လတှကွေောငျ့ ဝဖေနျမှုတှရှေိခဲ့ပါသေးတယျ. …
သူမတို့ကို ခဈြကွတဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့အားပေးမှုနဲ့ ရပျတညျနခေဲ့တာကွောငျ့ ခုဆိုရငျပြျောရှငျနပွေီဖွဈပါတယျနျော..သံစဉျမောငျကတော့ အဈမဖွဈသူ ဘဘေီမောငျနဲ့အတူ အိမျကကိုယျပိုငျစီးပှားရေးကိုဘဲ ဝိုငျးကူပွီးလုပျပေးနသေူ ဖွဈပါတယျ။မကွာသေးခငျကလညျး သံစဉျမောငျ ရဲ့ Instagram story တှငျ ဝမျးနညျးစရာ သတငျးလေးတဈခု တငျပေးလာတာဖွဈပါတယျ။ဒါကတော့ သူမနဲ့ တရားစခနျးမှာ အတူဆုံဖူးတဲ့ ကိုရငျလေးတဈပါး ကိုယျ့ကိုကိုယျ အဆုံးစီရငျသှားတဲ့အတှကျ ပွောမပွတတျအောငျ နာကငျြခံစားနရေတာ ဖွဈပါတယျ…။
ကှယျလှနျသှားတဲ့ ကောငျလေးနဲ့ ပွောခဲ့တဲ့အမှတျတရလေးတှကေိုလညျး ဝမြှေပေးထားတာ ဖွဈပါတယျ။” ဘာလို့မြား ကိုယျ့ကိုကိုယျသတျသတေဲ့လမျးကိုမှ ရှေးသှားတာလဲ သုသုလေးရယျ” ၊ ” ကိုရငျထှကျတော့ အိမျမှာဆယျရကျလောကျလာနပွေီး စာလေးရေးပွီးထားခဲ့တယျ မကျဆငျဂြာကနလေညျး တဈအိမျလုံးကို ကနျတော့ခဲ့ပါတယျတဲ့ ဒါနောကျဆုံး နှုတျဆကျသှားတာလား မောငျလေးရယျ” ဆိုပွီး ဝမျးနညျးစှာဖွငျ့ ရေးသားထားတာ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးတှလေညျး ဝမျးနညျးနတေဲ့ သံစဉျမောငျကို အားပေး စကားလေး ရေးပေးခဲ့ကွပါအုံးနျော…